Mmekọahụ - ndị na-eme ihe ike, ghọtara mgbaàmà na ihe ọzọ
Iyi egwu na ugwo - kwurula usoro ndi ozo na umu
Olee otú iji chebe ụmụ site na mwakpo mmekọahụ na Intanet?
Echere na nchekwa nke ịntanetị
Ebee ka mmegbu nke ụmụaka na ndị na-eto eto na-amalite?
Ihe ịrịba ama maka mmegbu
Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na a na-emegbu nwa gị?
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na e nwere nrutuaka
Nne na nna niile chọrọ ichedo ụmụ ha ka o kwere omume site na ime ihe ike na mmegbu. Ma olee mgbe otu onye nwere ike isi soro ụmụaka kwurịta isiokwu a? Gịnịkwa ka otu onye na-adọ nwa ya aka ná ntị karịsịa? Ọ dị mkpa iji gosipụta ihe niile akọwapụtara ma ọ bụ na enwere iwu ole na ole iji chebe nwa ahụ pụọ na mwakpo mmekọahụ? N'ihi eziokwu ahụ bụ na ndị na-eme ihe ike na-abụkarị ndị òtù ezinụlọ, isiokwu nke ịṅụbiga mmanya ókè bụ ọbụna ihe siri ike karị, a ghaghịkwa itinye ya n'ọrụ nke ukwuu. Ọ dị ezigbo mkpa ịkụziri nwatakịrị ahụ na nsogbu ọ bụla na egwu nile na-abịakwute ndị nne na nna.
Mmekorita nwoke na nwanyị - chebe onwe ha site n'inwe onwe ha
Ndị na-enwe obi ike na-enweghi obi abụọ ga-abụ ndị a na-emetọ. Ọnụ mgbochi maka onye omekome yiri ka ọ dị elu ebe a, ebe ọ na - atụ egwu na nwatakịrị ahụ ga - agbachitere onwe ya ma ọ bụ kwuo okwu ọjọọ n'ụlọ. N'ihi ya, ọ dị mkpa inye nwa gị ihe kachasị mma na-ahụ maka onwe ya na ilebara mkpa anụ ahụ ya anya ma kwanyere ya ùgwù. Nke a na-amalite na nsopụ nwanne ya, nke nwata ahụ jụrụ. Akwụsịla ma ọ bụ na-echegbu onwe gị, nke na-eme ka nwatakịrị ahụ ghara iru ala.
Kwụsị ịme ụmụaka
A "Ọ bụghị na ihe ọjọọ, sere onwe gị ọnụ, ma ọ bụghị nwanne nna ẹduede" bụ a bed ebe nkpuru germinates ahụ mejọrọ na-eme n'ọdịnihu. N'ihi na ọbụna o nwere ike iji okwu ndị dị otú a mee ka nwatakịrị mee ihe ọ na-achọghị. Gịnị a na nwa chọrọ na ihe na-abụghị, ọ na-ekpebi onwe ya. Ọ na-achọ obi ike iji na-ekwu na ị na-achọghị ka metụrụ nwanne mama ya. N'ihi nke a, ụmụ ha kwesịrị onwe-obi ike na mmetụta na-enwe ike eme onwe-kpebisiri ike na ha.
Bụ nwa gị kama ihere na debeere, i nwere ike ime ya obi ike na pụrụ iche ọmụmụ. Dị taa na ọ fọrọ nke nta ọ bụla obodo, ọbụna onwe-agbachitere maka ụlọ akwụkwọ ọta akara ụmụaka na-enye ụfọdụ òtù. Nke a abụghị na-ekwu ya, na a ụlọ akwụkwọ ọta akara nwa nwere ike chebe onwe ha megide onye okenye n'ụzọ dị irè iji chebe, ma ihe ọmụma na a na nwa-enweta n'ụzọ dị otú ahụ na-eme ka ọ na ndị ọzọ obi ike na obi ike - ma na-ewetara ya na otú si aja ọrụ.
Chebe oghere na agụmakwụkwọ!
Ezi mmekọrịta gị na nwa gị bụ alpha na Omega na-agwa nwa gị ka ọ kọọrọ gị ya mgbe ọ dị mkpa. O doro anya na ị kwesịrị ịkụziri nwa gị ihe gbasara mmekọahụ, imeghe na n'enweghị ihere. Akụkọ na aṅụ na obere okooko osisi adịla anya.
Nwatakịrị nwere ike naanị aha ya. Ya mere, dị ka o kwere mee, nye akụkụ ahụ niile aha ziri ezi ma atụla ụjọ ịza ajụjụ nwa gị n'eziokwu.
Ọ bụrụ na nwa gị rịọrọ - ọ ga-ajụ, ebe ọ bụ na ụmụaka nile site na afọ ụfọdụ nwere mmasị! - Ebe umuaka si bia, gwa ya na ya enweghi ihu mmadu dika o kwere mee ma wepu akwa ahu n'èzí. E nwere ugbu a akwụkwọ na akwụkwọ ọgụgụ dị mma nke na-enyere ndị nne na nna aka inwe mmekọahụ n'enweghị ihe mgbochi.
Ụmụaka ndị na-eto eto kwesịrị ịma ihe mmebi ahụ bụ. Kọwaara nwatakịrị gị ihe dịka o kwere mee nakwa n'atụghị ụjọ na mmegbu na-eme ugboro ugboro. N'ezie, ọ bụ njem siri ike n'etiti ịdọ aka ná ntị na nchegbu.
Ya mere, ọ dị mkpa na ị ga-agwakwa nwa gị: nke ahụ dị, mana ọ na-esighi ike ime. Ma ọ bụrụ na ọ na-eme, ị ga-ekwurịta ya. Ụzọ kachasị mma nke ndị na-eme ihe bụ ime ka nwatakịrị ahụ kwụsị. Ọ ga-eme egwu ma ọ bụ gbalịa ime ka nwatakịrị ahụ nwee nsogbu. Ma ọ bụ ọ na-eme nkwa ma na-akwụghachi nwa ahụ maka ịgbachi nkịtị. Nke ahụ kwa, nwa gị kwesịrị ịma. Ndị maara ụzọ ga-achọpụta na ọ dị mfe ịmara mgbe mmegbu na-amalite ma nwee ike ichebe onwe ha megide ya.
N'ihi na mgbe mgbe, mmegbu na-amalite na-agagharị, ọ bụghị site na nke abụọ na nke ọzọ. Onye na-eme ihe na-eche na ụzọ ya ga-aga n'ihu na oge oge ọzọ. Ya mere, gbaa nwa gị ume ikwu okwu ozugbo banyere ihe ọ bụla na-adịghị adajụ ya, ọ bụrụgodị na ọ na-eyi egwu. Ọ ghaghị ịma na enwere ike ichebe ya ma ọ bụrụ na ọ na-ekwu banyere ya.
Na mgbakwunye na obere ihe mgbochi, Intanet na-enyekwa ndị omempụ ohere ọhụrụ. Ime ụlọ a kwesịrị ịtụle ya dịka ndị nne na nna.
Nchebe megide iyi egwu mmekọahụ na Intanet
Mpụ idaha: Internet kwesịrị ruru eru ka ya onwe ya ịnọgide na-amaghị aha n'ihi na o nwere ihe ọ na aka ihe ndụ n'ezie nwere ike ime: zuru anonymity na ọ dịghị àmà. N'ihi ya, karịsịa ebe a na-eme ihe nkiri mpụ na-ewu ewu.
O di nwute, umuaka, ndi na amaghi iwu nke uwa ohuru a, bu ndi kacha ata ahụhụ. N'ụzọ dị mwute, e nwere iwu ole na ole na-eme ka ọbụla bụrụ nwata na-agagharị na ụwa nke ebe nrụọrụ weebụ.
Enweghị aha ndị na-eme ihe ọjọọ na-emeghe nke ndị ahụ metụtara
Amanye ndị na internet nnọọ mfe oyiyi, na adreesị email, nọmba ekwentị na ọbụna adreesị nke ha tara. Dị ka ụmụaka na-eto ndị mmadụ na-n'ihu ọha biputere ndị a na mara na saịtị, ọ bụ ya mere ọ bụghị ntaramahụhụ maka nanị ha a ikuku na ihe ọmụma. Kasị perpetrators-a ọmụma ụfọdụ ebe na kọntaktị na ha mesoro ime onwe ha mgbe tọrọ ha bụ ndị na-eme ka hà nwere mmasị n'otu ihe. Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụkwa ebe akparịta ụka ma ọ bụ mkpọsa ọha na eze, bụ nke a na-eme site na nke mbụ kọntaktị. Na ndị a forums, na-eto eto na-ekpokọta na nkịtị metụtara (atụ portals, ebe na-eto eto nwere ike melite ha akụkọ, nke na-ahụ gosiri), nke mere na a na kọntaktị na ndị nkịtị na-enwe ntụrụndụ ọzọ bụ inconspicuous. The perpetrators na-eji a adịgboroja profaịlụ, ya bụ, dakọtara ha data (ụbọchị ọmụmụ, ebe obibi, agụmakwụkwọ) dị ka ekwuola, bụghị eziokwu.
Ihe bụ nsogbu bụ na-na-enwe mmetụta, ọtụtụ ụmụ na-eto eto na-echebe n'ebe obibi ha. The ụwa na netwọk bụ mebere, otú ahụ n'ihe ize ndụ yiri ka naanị virtual na bụghị ịchọta ụzọ ha n'ime eziokwu. Ma, olee mgbe ị na-enwe mmekọahụ? Ọ bụghị mgbe nile ka ọ na-abịa na onye omekome na-ekwurịta banyere mmegbu. Iziga ụfọdụ perpetrators ahụ tara oyiyi mmekọahụ ebumnobi ma ọ bụ fim na-enwe mmekọahụ content - nke bụ n'onwe ya a mpụ iwe n'ihi na ọ pụrụ nwa, ndị na-eto na-enweghị ahụmahụ, ọ na-agba na-emenye ụjọ. Ihe ojiri ojoo ma o bu arịrịọ nke iziga foto onwe ha bu ihe ndi ozo kpatara.
Ịgba egwu mmekọahụ na-arụ ọrụ abụghị obere iwe
Ogo zuru oke maka iji egwu egwu - Atụmatụ maka Ụmụaka
Ihe kachasị mkpa bu aha anonymity. Edela adreesị gị ma ọ bụ nọmba ekwentị gị n'Ịntanet. Enwetala data gị na onye ọbịbịa, ma hapụ naanị data ndekọ ma ọ bụ foto ezinụlọ. Ọ bụrụ na ị na-eji aha ọkpọ, ọ gaghị etinye aha gị n'ezie ma ọ bụ kpughere afọ gị, dị ka Lisa99. Site na nke a, onye ahụ nwere ike ikpebi na a mụrụ Lisa n'afọ xxxx. Jiri ọnụ ọgụgụ zuru ezu na aha. Na ibe dị ka Facebook, ị na-ahụkarị ma ọ bụrụ na i debeghị foto gị. Jide n'aka na foto a abughi òkù maka ndị na-eme ihe ike.
Eziokwu megide ebe nchekwa. Ọgbụ bụ ohere, oghere na-enweghị ókèala na-enweghi ohere ọ bụla. Ihe niile na-ama jijiji n'ebe a: site n'aka ezigbo enyi ahụ karịa ndị omempụ na-abaghị uru na onye na-apụnara mmadụ ihe n'ụlọ na nwa molester. Ọtụtụ mgbe, ndị omempụ kasị njọ na-eji ejiji kacha mma. Mara na enwegh i enyi n'ezie n'agbanyegh i ezigbo nk o.
Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-atọ ọchị, gwa ndị mụrụ gị banyere ya. Enwela nwaa ime ihe ị na-achọghị. Foto ndị dị na nọmba ekwentị yana ọrụ nhazi njem adịghị n'aka ndị bịara abịa.
Mara na ezigbo ndị mmadụ na-ezo n'azụ profaịlụ profaịlụ. Ọ bụghị onye ọ bụla bụ enyi - na ma MickeyMouse17 bụ ezigbo onye na-ahụ ụtọ na olu kacha mma ọ na-azọrọ na ọ bụ onye na-enyo enyo.
Enweghị nzukọ na ndị enyi Intanet. Enwetụla enyi gị ị maara na ịntanetị. N'ebe a, ọ na-adakwasị otu n'ime nsogbu kachasị njọ. Ejila ụdị akwụkwọ ịkpọ òkù a! Kama nke ahụ: Ọ bụrụ na ọ na-adị gị mma, ị ga-akọ akụkọ a ozugbo na onye nchịkwa nke nnọkọ ahụ. Otu ihe a na-emetụta ikpe ahụ mgbe mmadụ na-agwa gị ihe gbasara mmekọahụ, ma ọ bụ vidiyo, foto ma ọ bụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ nwere ihe ngosi kwesịrị ekwesị. Onye ọrụ nke saịtị ahụ nwere ike ịgbanye ndị uweojii ozugbo.
Onye obula nke kwenyere na mmegbu nke umuaka na ndi ntorobia ga-amalite mgbe o bula n'omume nke mmekorita di nma. Ma, ebe kpọmkwem ka mmegbu ma ọ bụ iyi egwu mmekọahụ malitere n'ezie? O doro anya na ị pụghị ịdọrọ ókè a n'ụzọ doro anya. Otú ọ dị, ihe ọ bụla megidere ùgwù na ọchịchọ nwa ahụ bụ n'ụzọ doro anya na ọ bụ omempụ.
Nchebe megide mmegbu ụmụaka
Site na nkọwa ahụ, nke a nwere ike ịbụ nyocha anya ma ọ bụ okwu rụrụ arụ. Ohaneze anyị anaghị echebara okwu a echiche, nke dị mma n'otu akụkụ, onye ọ bụla na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nkụzi na-aṅa ntị. Mana ọ na-edugakwa n'eziokwu bụ na ọtụtụ ndị nna na-ejikarị ụmụ ha egbochi, ka ha wee ghara ime ihe ọ bụla na-ezighị ezi.
Mmekorita mmekorita nwoke na nwanyi
Na mbido bụ iyi egwu. N'ụlọ nkata ma ọ bụ forums ụmụaka ma ọ bụ ndị nọ n'afọ iri na ụma na-ezipụ vidiyo ma ọ bụ foto na ọdịnaya rụrụ arụ. Mgbe ụfọdụ a na-ajụ ha ka ha nwee mmekọahụ, ọtụtụ n'ime Skype, n'ihi ya onye ahụ mebiri nwere ike ile ha anya. Ụdị mmegide ndị ọzọ gụnyere agụgharị n'okporo ámá ma ọ bụ ịkọgharị okwu na ọdịnaya dị iche iche.
Nzọụkwụ ọzọ na-emetụ nwata ahụ aka. Onye na-eme ihe ahụ chọrọ ka nwatakịrị ahụ nọ na-emetụta ya, na-emetụ ya n'onwe ya ma ọ bụ na-agba ya ume imetụ onwe ya aka ma hụ ya. Mkpịsị aka nwere ike iduga njina n'ike na / ma ọ bụ na-agụnye ihe ndị ọzọ gbasara mmekọahụ. N'ezie, ihe na-akpali agụụ mmekọahụ ụmụaka bụ akụkụ nke mmegbu nke ụmụaka na ndị na-eto eto. Ebe a na nwa na-amanye Yipụnụ uwe na-filmed na photographed. Mgbe ụfọdụ, a na-amanyekwa gị ile foto na ihe nkiri na-akpali agụụ mmekọahụ ma ọ bụ ikiri omume ndị ọzọ. Ụdị mmekorita dị iche iche dịka echiche efu nke ndị na-emegbu mmadụ!
Gini mere o ji adighi ike igosi ya?
Mmetụta nke mmegbu bụ oke elu. Nke a na-esi na eziokwu ahụ bụ na ndị na-eme ihe ọjọọ na-esite na gburugburu ebe obibi nwata ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dị mwute ikwu na ndị òtù ezinụlọ na-eji ike ha na-achị nwa ahụ. Nwatakịrị ahụ nọ na mmekọrịta nke ịdabere, uche na anụ ahụ, na enweghị ike iguzogide mwakpo mmekọahụ maka ogologo oge. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ kpebie ịgwa onye okenye ọzọ nọ n'ezinụlọ, ọ naghị eburu ndị uweojii. Nke bụ eziokwu bu, ka nwatakiri ka onye na-eme ihe omume, o di ka o ga-adighi ya na a ga-ekwuputa ya ma kpee ya ikpe. Nke bụ eziokwu bụ na ụmụ nwanyị ka na-abụkarị ụmụ nwanyị bụ ndị omempụ ahụ. Ndị nwoke na-emekarị na-abịakarị site na gburugburu ebe obibi ma ọ bụ ndị na-enwe mmekọrịta chiri anya karị.
Ebe ọ bụ na ndị na-ata ahụhụ na-anọkarị ọdụ ruo ogologo oge, ọ na-esi ike ịchọpụta mmegbu. A na-amata ya mgbe ọ na-agafe, ihe mgbaàmà uche ma ọ bụ nke anụ ahụ emeela. E nwere ọtụtụ ihe ịrịba ama ndị nwere ike igosi na ị na-emetọ ha, mana ha anaghị egosi ya.
Kedu ihe bụ ihe mgbaàmà nkịtị nke mmegbu?
Karịsịa na isiokwu a, ọtụtụ ndị na-atụ egwu ọbụna ikwupụta ntanye, n'ihi na, n'ezie, ebubo na-ezighị ezi na-enwe mgbe niile na-agbaso ebubo ndị ahụ na mgbe mgbe ọ naghị adịghachi mma. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịbụ na onye ahụ nwere mmasị igosipụta nkwenye karịa ịghara ileghara mmegbu na onye ahụ na-ata ahụhụ anya ruo ọtụtụ afọ.
Mgbanwe omume na-enyo enyo!
Mgbanwe mgbanwe dị iche iche na-abụkarị ihe ịrịba ama mbụ nke mmegbu. Nke a apụtaghị na ọ bụla omume mmebi iwu dabeere na mmegbu. Dịka nke ahụ, iwe na ndị enyi, akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ ọnwụ nke onye na-akpachi anya nwere ike ime mgbanwe a n'omume. Ọzọkwa, ụfọdụ usoro ọmụmụ na mmepe mmepe na-abụkarị ihe na-akpata adịghị mma omume rụrụ arụ ruo nwa oge.
Ịchọpụta nke ọma na-enyekarị ihe ọmụma, ma onye ekwesịghị ichefu na nwa ọ bụla na-eji aka ya eme ihe n'ụzọ dịgasị iche dịka agwa, afọ, onye na-eme ihe na iwu. Ihe dị mkpa: Ọ bụrụ na ụbụrụ na-arịwanye elu, otú ahụ ka ntanye ahụ na-esiwanye ike!
Mmetụta na-emetụ n'ahụ n'omume omume nwata
A ọnụ ọgụgụ nke n'ókè bụ karịsịa enyo na ndị mụrụ ya kwesịrị ime uzu. Ndị a gụnyere ndị karịsịa na ụmụ ọhụrụ: nsogbu ihi ụra na ubara omume nke na-arọ nrọ, bedwetting ma ọ bụ bowel mmegharị mgbe ogologo oge Saubersein, ọhụrụ na-atụ egwu ma ọ bụ atụ n'ozuzu, whiny omume, nlaghachi azụ ka ụmụaka omume na nwa ahụ n'ezie e echekwara (atụ, ịmi aka, nwa okwu) ụba mkpa maka nchebe, ọnwụ nke agụụ ma ọ bụ ọchịchọ, enweghị kọntaktị, egwu nke na-elekọta mmadụ na ibe ya, agbahapụ a ụwa nke ya, pụrụ iche mmasị ozu nke ụmụaka ndị ọzọ na ndị okenye, emi odude ke a pụrụ iche na-egosikwa na egwuregwu (mmekọahụ na-gbanwee na egwuregwu ma ọ bụ isiokwu nke egwuregwu), enweghi mmasị na ihe ndị mara mma kwa.
Na ụmụaka ndị toworo eto, ọtụtụ ihe ndị ọzọ nwere ike ịdabere na iji ọgwụ eme ihe, na mpụ, ịda mbà n'obi, echiche igbu onwe ha, nsogbu iri nri, na ọbụna ọdịda nke arụmọrụ ụlọ akwụkwọ. Ọtụtụ ndị na-eto eto dị otú ahụ na-egosipụtakwa àgwà omume mmekọahụ na-adọrọ adọrọ.
Mgbaàmà nkịtị nke mmegbu
Na mgbakwunye na mgbanwe omume ndị a na-ekwu na-abụkarị mgbaàmà anụ ahụ, nke naanị ma ọ naghị enye ihe àmà zuru oke nke mmegbu. Ọtụtụ mgbe, ha na-enyo enyo naanị na mmekorita uche. Abdominal mgbu, afo mgbu, ichihịa, ọbara na mmamịrị (n'ihi na eriri afo nje) ma ọ bụ bowel ije (site gbasara ike fistulas) nwere ike ịbụ atụ na ndị ọzọ ma ọ bụ obere na-adịghị emerụ na ọdịdị, ma ha na-abụkarị ihe ịrịba ama nke n'ụzọ mmekọahụ. Flashy gụnyere mgbu na Genital ebe, Ugboro itching, abdominal unan, ebute site ná mmekọahụ na-achọghị ime.
A na-ekpughe mmekorita nwoke ma ọ bụ nwanyị mgbe nwatakịrị ahụ na-akọrọ onye toro eto, ma ọ bụ mgbe o gosipụtara ihe mgbaàmà doro anya na ndị nne na nna na-enyo enyo ma malite inyocha.
Mmetụta ahụ na-esitekarị n'ụjọ ahụ! Gịnị ugbu a? Kedu ka m ga-esi gaa n'ihu iji chebe nwatakịrị m ma taa onye na-eme ihe ahụ ahụhụ? Ọ bụrụ na nwatakịrị ahụ dị oke banyere isiokwu ahụ, ọ ga-abụkarị zoo ya ma ọ bụ mee ya na mkpịsị. E nwere ọtụtụ mgbaàmà nke na-egosi na a na-emegbu mmadụ, a kọwawokwa ya ebe ọzọ.
Ọ dị ezigbo mkpa iji nwa ahụ kpọrọ ihe mgbe ọ na-ekwu na ọ bụ mmegbu. N'okwu ole na ole ụmụaka na-eche echiche dị otú ahụ. Ya mere, ha na-ewere ihe omume ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ naghị emetụta ya ma zoo ya.
Ihe ịrịba ama maka ịmegbu nwa
Iji mee ka ihe ka njọ, na ụmụaka adịghị ekwu okwu n'ihi na onye na-eme ihe na-abịa site na gburugburu ebe obibi, na-esite n'ezinụlọ ha! Nke a nwere ike ịbụ ihe kachasị mma maka ụmụaka!
Nwee obi ike ma mee ka nwatakịrị ahụ dị ike!
Nọrọ nwayọọ, ọbụna mgbe ọ na-esiri ike. Nwatakịrị ahụ nọ n'ọnọdụ ọ na-eche na amaghị ama, mgbagwoju anya na ikpe mara. Ọ bụghị n'oge na-adịghị na ọ bụ ndị na-eme onwe ha na-ata ụta nwa ahụ.
Ọ dị ezigbo mkpa ịnweta enyemaka ọkachamara ngwa ngwa o kwere mee. Ị nwere ike ịkasi nwa gị, mee ya, na-echebe ya ma na-anakọta, ma naanị ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ na ndị ọkachamara na-azụ na ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-emeso psychological mmebi na doo ọ bụla eme ihe. Ha na-enyere nne na nna aka idi mma na n'ụzọ mmekọahụ nke ya na nwa ya, nwere ike na-ezo aka ọnọdụ ndị siri ike na otú obibi ha.
Dịka nne ma ọ bụ nna, ị nwere ike inyere nwatakịrị ahụ aka site na oge ọ bụla dịka o kwere mee. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ dị ka ihe na-ezighị ezi na nke na-ezighị ezi, àgwà na-enyekwa nchebe ma nyere nwa ahụ aka ịhazi ahụmahụ ahụmahụ.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-amalite site n'echeghị ụfụ na oge na-esiri ike. Ọ bụrụ na nwatakịrị anaghị ekwu banyere mmekorita onwe ya, ekwesighi ịjụ ya ajụjụ ndị doro anya, n'ihi na ọ bụghị ya, nwatakịrị ahụ ga-emechi.
Gwa nwa ahu banyere oge ya, karia ihe ozo, ma gee nti nke oma ma oburu na o nekwu okwu banyere ihe ojoo. Ụfọdụ mgbe - n'ezie mgbe - na nwa a nkọcha na motto: "ga Ma na unu ọtụtụ mbụ si" Ma ọ bụ njọ: "Gịnị mere unu ka onwe gị n'ihi na ndị dara" na "m ga-gị ebe ... "
Okwu ndị dị otú a na-agba ume nwatakịrị ahụ ma ọ na-eche ọbụna njọ karịa nke ahụ. Ọ na-eme ka nwatakịrị nwee obi ike ọbụna ikwu okwu ọjọọ. Ọ bụrụ na ị nwetaghachiri ujo mbụ ahụ, ị ​​kwesịrị, dịka e kwuru n'elu, rịọ ndị ọrụ pụrụ iche maka enyemaka. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a na-agụnye ndị uweojii, n'ihi na mmejọ ụmụaka bụ nnukwu mkparị nke a ga-ata ahụhụ iji kpuchido ụmụ ndị ọzọ site n'aka onye a. E kwesịrị imere ya na mgbe ndị uweojii ga-eme maka abamuru nwatakịrị ahụ na nkwurịta okwu na ndị ọkà n'akparamàgwà mmadụ.